Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo ku kulmay Jabuuti | Wardoon
Home Somali News Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo ku kulmay Jabuuti
Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo ku kulmay Jabuuti
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dhiggiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa wadahadallo hor dhac u ah xalinta khilaafka labada dowladood waxaa ay ku yeesheen dalka Jabuuti halkaa oo uu maanta ka furmay shir madaxeedka Urur gobolleedka IGAD.
Goobta ay isku soo hor fariisteen labada madaxweyne waxaa ku sugnaa oo joogay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ra’iisal Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo garwadeen ka ahaa is araga labada madaxweyne.
Ra’iisal Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qoraal uu soo dhiggay boggiisa Twitterka ayaa yiri” “ Awoodda xasilloonida gobolkeenna waxaa mar walba fure u ah iskaashiga iyo horumarka, waxaan ku faraxsanahay hadaan nahay hogaamiyeyaasha inaan miiska wada-hadalno oo aan ka wada hadalno arrimaha cakiran ee ka taagan gobolkeenna ayuu yiri” Abiy Axmed.
Shirka ka furmay dalka Jabuuti ayaa qoddobada miiska saaran ee laga wada hadlayo waxaa ka mid ah khilaafka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya oo waayadii ugu danbeeyay halkii ugu xumaa gaaray .
Previous articleAl-Shabaab oo qabsatay mas’uul ka tirsan KENYA
Next articleCiidamo Aan Hore oo laga dejiyay Gobolka Gedo+sawirro
AKHRISO: Ra’iisul Wasaare Rooble oo u jawaabay Farmaajo
Beesha caalamka oo War ka soo saartay xiisada gobolka Gedo...